जाने हैन त काभ्रेको गुर्दुमडाँडा ? प्याराग्लाईडिङ सरररर……… – NamoBuddha Khabar
जाने हैन त काभ्रेको गुर्दुमडाँडा ? प्याराग्लाईडिङ सरररर………
आइतबार, बैशाख १६, २०७५ | १३:५२:२३ |
“माथि डाँडामा त चिसो होलानी” एक सरो सर्ट पाईन्टको भरमा विहान सबेरै कुशादेवी पुग्दै गर्दा पत्रकारहरुकै समूहबाट सरिता सापकोटाले बोलेको यो कुराले म झस्कें । “फुलचोकी डाँडाकै रेञ्जमा त होनी गुर्दुमडाँडा” फेरि अर्को साथी बोले । एक्कासी जस्तै मौसममा आएको परिवर्तनले आकाश हाँस्न सकेको थिएन । कुशादेवी वेशीमै वर्षाले स्वागत गर्यो,केहिदिन ज्वारोले थलिएर तंग्रिएको मलाई त झन चियो महसुस हुनु स्वाभाविकै थियो । हाम्रो टार्गेट कार्यक्रम थियो–“कुशादेवी विहावर क्षेत्र पर्यटन महोत्सव”को उद्घाटन,तय गरिएको स्थल थियो गुर्दुमडाँडा ।
“पानीले गर्दा सोचिएजस्तो नहोलाकी ।” आयोजक कुशादेवी क्षेत्र सरोकार समाजका एक सदस्य भन्दै थिए । हेलिकप्टरबाटै भएनी कार्यक्रम उद्घाटनमा आईपुग्छु भन्ने वचन नागरिक उड्डयन् तथा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीबाट पाएका थिए आयोजकले । मौसम खरावीले मन्त्रीको अनुपस्थिती र स्थानिय जुटाउन देखिएको असहजताले आयोजक यसरी चिन्तित देखिए । वर्षाका कारण आयोजक कुशादेवीवेशीमै औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने मनस्थीतिमा पनि देखियो ।
उद्घाटनका लागि तय गरिएको समय गुज्रीसक्दा बल्ल आकाश उजेलिन थाल्यो । “लौ अब हामी माथिनै जाने भयौं,झट्टै गरौं ।” कुशादेवी स्कुल प्रांगणमा रहेका हामी पत्रकार टोलीलाई आयोजकले भने । हालसालै पुगेको बाटो,विहानभरिको वर्षाले गलेर चिप्लो भईसकेको थियो,यद्यपी त्यो जोखिम मोलेरै भएपनि कोही गुर्दुडाँडा लक्षित गाडी चलाउन कस्सिए ।
कुशादेवीबाट करिव ५ किलोमिटर माथि,नाकै ठोक्कैएला जस्तो उकालो हुदै हाईकिङ(पैदल) यात्रा गरी गुर्दुमडाँडा निस्कनेहरुको लावालस्कर देखियो । वर्षाले हिलाम्मे बाटो र केहि चिसोको प्रवाह नगरी वालबालिका,युवा,वृद्धवृद्धा सबै देखिए त्यो पंक्तिमा । यसरी स्थानियको तदारुकता र सक्रियताले कार्यक्रम फिक्का हुने शंकालाई टारिदियो ।
दिउँसो १ बजिसकेको थियो , कोही मोटर र कोही हाईकिङबाटै गुर्दमडाँडा पुग्यौं हामी । कोही गत साल पुगेको अनुभव सुनाउदै थिए । यो गाउँ पनौती नगरपालिका अन्तरगत कुशादेवी नयाँगाउँमा पर्छ । तल बजारबाट निकै माथि आईपुगेको आभास भयो मलाई । आफ्नो क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा उत्तिकै सक्रिय पनौती नगरपालिकका मेयर भिम न्यौपाने हामीभन्दा अगाडीनै पुगिसक्नुभएछ ।
मौसम खरावीले पर्यटनमन्त्रीको आगमन नहुने भएकोले केहि समयपश्चात औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटनका लागि स्थानिय जनप्रतिनिधि(संघिय सांसद) गंगावहादुर दोङ (वमध्वज) आईपुग्ने खबर आयो । हामी भने भर्खरै पन्छिदै गरेको हुस्सु कुहिरोको रफ्तारमै वरिपरिका रमाईला दृश्यहरु कैद गर्नतिर लाग्यौं ।
त्यही बेला ति डाँडाका बस्तीहरुमा तामाङ सेलो गीतहरु गुञ्जिरहेका थिए । यात्रामा रहेका तामाङ पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सचिव पेमा लामाको मनमा कौतुहल्ता जागेछ । यहाँका आदिवासी तामाङ हुनुपर्छ भन्ने बारे छलफल चल्यो हामी दुईमा । मैले भने–“तामाङ समुदाय भए,यहाँ होमस्टे गज्जवले चलाउन सकिन्छनी,सँस्कृति प्रवद्र्धन पनि हुन्छ ।”
यसमा सहि थप्दै पेमाले भन्नुभयो–“लेकमा पहिला पहिला गोठ बस्ने चलन हुन्थे,पक्कै यहाँ पनि तामाङहरुको गोठ थिए,त्यसैले पहिला यो ठाउँको नाम गोठेगाङ(गोठ डाँडा) होला,पछि अपभ्रंस हुने क्रममा गोठेगाङ,गोठडाँडा हुदै “गुर्दुमडाँडा” भएको हुनुसक्छ ।”
यहि विचार मन्थन गर्दैगर्दा दक्षिणीपट्टि जस्ताको टहरा छेउ एक वृद्धा महिला भेटिए । हामीलाई देख्नेवित्तिकै “ह्राङनी तामाङ हिन्हा ? स्ह्युगोले ।”(तपाईहरु तामाङ हो ? बस्नुस् न आउनुहोस् । यसरी आत्मीय आदरका साथ स्वागत गर्ने ६० वर्षीया ति महिला लमिन डोल्मो तामाङ हुनुहुन्थ्यो । उहाँका अनुसार अलि पर सिसाखानी लेकमा वेशीटारका राजाले गोठ राख्ने चलन बसाएका थिए । तामाङहरु गोठ स्याहार्थे । यसबाट पत्रकार पेमा र मेरो अनुमान अलि नजिक आईपुगेको भान भयो “गुर्दुमडाँडा”को नाममा पक्कै तामाङ सभ्यता र जीवनशैली गाँसिएको छ भन्नेमा ।
स्थानिय अगुवा,पनौती नगरका मेयर भिम न्यौपानेले पनि भन्नुभयो‐ “गुर्दुमडाँडा तामाङ भाषाबाटै रहेको बुझिन्छ । उनिहरुको भाषामा ‘गुर्दुम’ को अर्थ ‘अग्लो’ भन्ने रहेछ । उनिहरुकै भाषामा ‘गुर्दुमगाङ’ अर्थात गुर्दुमडाँडा ।”
समुन्द्री सतहबाट २७०० मीटर अग्लो उचाईको फुल्चोकीको काखैमा रहेको सानो लेक गुर्दुमडाँडा प्राकृतिक रुपमा निकै मनमोहक देखिन्छ । “मौसम सफा नभएर मात्रै हो,यहाँबाट ज्योमोगाङ (सगरमाथा हिमचुली) पनि देख्न सकिन्छ ।” लमिन डोल्मो तामाङले भन्नुभयो ।
एक वर्ष अगाडीदेखी पनौती नगरपालिकाले स्थानिय पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि थालेको अभियानमा खुसी देखिनुहुन्छ डोल्मो जस्तै स्थानियहरु । बाटो पुगेको ३ वर्ष भयो त्यसैले स्थानियको दैनिकी सहज बन्दै गएको छ । भुकम्पले क्षति पुगेको घर बनाउन मुस्कील थियो, घर बनाउन ढुंगा समेत जुटाउन मुस्कील परेका उनिहरुलाई बाटो बनेपछि निकै सजिलो भएको लमिन डोल्मा बताउनुहुन्छ ।“पानी परेन भने गाडी आउँछ अहिले त,मल,चिनी,चिउरा बोक्नुपर्दैन । पाहोरपनि कार्यक्रम भो,योपालीनी भईराछ अब मान्छेहरुको पनि चहलपहल होलाकी ।”– उहाँले यसरी आश फिजाउदै खुसी साट्नुभयो ।
गर्दुमडाँडाबाट शनिबारदेखी औपचारिक रुपमा प्याराग्लाईडिङको व्यवसायिक उडान सुरु भएसंगै स्थानियमा उत्साह जागेको हो । गुर्दुमडाँडाको आसपासमा देखिएका तोरीखोरिया लगायतका तामाङ बस्तीमा अब बाटोको स्तरउन्नती हुने,होमस्टे चलाउन पाईने,स्थानिय जडीवुटीको प्रशोधन विक्री वितरणले थप आम्दनीको स्रोतको विकास हुने आश पलाएको छ ।
हराभरा जंगल,२८० प्रजातीका चराचुरुङ्गी,औषधिय वनस्पतिले भरिएको फुल्चोकीको काखमा रहेको यि क्षेत्रको विकासका लागि थप कार्यक्रमहरु अघि सार्ने पनौती नगरपालिकका प्रमुख न्यौपानेको प्रतिवद्धता छ । पोखराको सराङकोटमा व्यवसायिक उडान गरेका कम्पनीसंग अब यो डाँडाबाट नियमित उडान भर्न आग्रह गरिसकेको न्यौपानेको भनाई छ । उहाँले स्थानियमाझ विश्वास जगाउँदै थप्नुभयो –“हामीले नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट अनुमति पाईसकेका छौं,अब स्थानिय पर्यटनका लागि यो दरिलो आधार हुनेमा दुई मत छैन । ”
गुर्दुम डाँडामा “कुशादेवी विहावर क्षेत्र पर्यटन महोत्सव” तथा प्याराग्लाईडिङको उद्घाटनको क्रममा यिनै क्षेत्रबाट संघिय चुनाव जितेका गंगावहादुर दोङ (वमध्वज) विगत सम्झदै भावुक बन्नुभयो । “पनौती कुशादेखीबाट जव माथि लागियो,कहाँ होला गुर्दुमडाँडा भन्ने लागेको थियो, तर अहिले थाहा पाएँकी म यहाँ धेरैपटक आईसकेको रहेछु,यहाँका जनताले मलाई माओवादी युद्धका क्रममा सुरक्षा दिनुभएको थियो,जहाँ हामीले बन्दुक लुकाएका थियौं,यि बस्तीका तामाङ दाजुभाई दिदीवहिनीहरुलाई म कहिल्यै विर्सन्न,सकेको सहयोग गर्नेछु ।”
स्थानियको माग र जनप्रतिनिधिहरुको भनाई,यसमा देखिएको तारतम्यले पनि यो क्षेत्रको विकास हुनेमा विश्वास पलायो ममा पनि । डाँडाको त्यो क्षण बोकी तल कुशादेवी बजार झर्दै गर्दा आकाश नियाली हेरें, आकाशभरि राता,पहेंला र हरिया रंगका प्यारासुटले आकाश छाईसकेछ । निकै रोमाञ्चीत हुदै बजार आईपुग्दा कुशादेवी बजारभरि मान्छेहरुकै धुईरो देखिन थाले, महोत्सव आयोजकले स्थानिय मौलिक खानाका साथै विभिन्न हस्ताकलाले भरिएका सामाग्रीहरुको स्टलहरु बजारभरि राखेका कारण तल बजारमा उत्तिकै भिड जम्मा भईसकेका रहेछन् ।
पोखराको साराङकोटपछि काभ्रेमा पहिलो पटक प्याराग्लाईडिङको पहिलो औपचारिक व्यवसायिक उडान हो यो । यहाँ प्याराग्लाईडिङको व्यवसायिक विकासका साथै होमस्टेमार्फत स्थानिय कला संस्कृति,प्राकृतिक छटा,बनस्पति जस्ता यि चीजहरु आम्दानीका दरिला स्रोत हुन सक्छन् । ठुला ठुला रिसोर्टहरु समेत चल्न सक्छ । यहाँ आईपुग्न चहाने आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई हाईकिङ त छँदैछ,कुशादेवी विहाबर क्षेत्र र ललितपुर क्षेत्रबाटबाट पनि सडक यातायातको सञ्जालले जोड्न सक्नुपर्छ ।
सडकको राम्रो व्यवस्था नभएकै कारण आयोजकले बैशाख १७ सम्म चल्ने महोत्सव अन्तरगत प्याराग्लाईडिङ बाहेकका सबै कार्यक्रम कुशादेवीबाटै सञ्चालन गरिरहेको छ ।
महोत्सवको अन्य आकर्षणका रुपमा कुशादेवी स्कुलको प्रांगणमा ट्राउट माछा, अर्गानिक मह, दुधका विभिन्न परिकार, ढिंडो, गुन्द्रुक, मकैका पिठोका परिकार, विहावर भेगमा उत्पादन हुने तरकारी तथा फलफुल र तिनका परिकारहरु पनि छन्,तिनका स्वाद पनि लिन सक्छौं तर यत्तिबेला देशदेखी विदेशसम्मका पर्यटकहरुको आँखा यहि गुर्दुमडाँडाको प्याराग्लाईडिङले खिचेको छ,गुर्दुमडाँडाको प्राकृतिक छटाले तानेको छ उनिहरुको मन । अब तपाई पनि जाने हैन त गुर्दुमडाँडा ? प्याराग्लाइडिङ सरररर………
तस्वीर :पेमा लामा